AH: ဂူဂဲလ်နှင့် ကစားခြင်း
နောက်တစ်ခုကတော့ zerg rush ပါ.
ဒါကို ဂူဂဲလ်ထဲကို ရိုက်လိုက်တာနဲ့ စာလုံးတွေကို သုညတွေက လိုက်စားလိမ့်မယ်… အဲ့ဒီသုညတွေကို နိုင်အောင်သာ Mouse နဲ့ လိုက်ပြီးတော့ ကလစ်ပေတော့….
နောက်ပြီးတော့ ဂူဂဲလ် က ကြောင်တောင်တောင် သင်္ချာအဖြေတွေကိုလဲ ပေးတတ်ပါသေးတယ်
ဥပမာ - loneliness number ဆိုတာကို ရိုက်ကြည့်လိုက်
- နောက်ပြီး once inablue moon ဆိုတာမျိုးကို ရိုက်ကြည့်လိုက်… အဖြေအဆန်းတွေ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
Posted by AH at 4/03/2013 02:48:00 PM
အားလုံးထဲမှာ askew, equation & zerg rush တွေကို ကြိုက်တယ်။ နောက်လည်း တင်ပေးပါအုံး။ ကျေးဇူးပါ :)
one more.. tilt
မြသွေးနီ April 3, 2013 at 5:56 PM
ကွန်နက်ရှင်မကောင်းသေးလို့ စမ်းသပ်ဖို့ နောက်တစ်ခါ ပြန်လာပါမယ်.. :)
ညိမ်းနိုင် April 3, 2013 at 7:12 PM
ကိုအွတ်ထောင်ပဲ ရှာရှာပေါက်ပေါက်၊ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ လေးတွေ တွေ့တတ်ပါ့...၊အားလုံးကိ်ု သဘောကျသွားတယ်....၊သုညတွေက သတ်လို့မနိုင်ဘူးဗျိုး.. :)
Goldfish Lay April 3, 2013 at 9:40 PM
I really like zerg rush. :) Thanks.
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) April 4, 2013 at 12:24 AM
တော်တော်လဲ ရှာဖွေတတ်တဲ့ မောင်အွတ်ထောင်။
အားလုံး စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဗိုင်းရပ်အကိုက်ခံရသလို ပုံစံမျိုးတွေပါလား မောင်အွတ်ထောင်။
San San Htun April 9, 2013 at 10:12 AM